Temarios opposiciones Correos 2021 ▷ ku cusbooneysii HALKAN! | Sameynta iyo daraasadaha
Ku dheji ajandaha mucaaradka
Ka dib markii la daabacay ku dhawaaqida mucaaradka Correos, waxaa la joogaa waqtigii la soo gudbin lahaa codsiyada. Sannadba sanadka ka dambeeya, Correos waxay soo saareysaa wicitaanno cusub oo loogu talagalay imtixaannada tartanka si loo yareeyo celceliska da'da shaqaalaha, sidaa darteed had iyo jeer waa wakhti fiican in la bilaabo barashada Mucaaradka Correos. Haddii aad rabto inaad waxbadan barato, halkan waxaan kuugu sheegeynaa wax walba.
Ajandayaasha la cusbooneysiiyay ee mucaaradka Correos
Hoos waxaad kaheleysaa dhammaan xirmooyinka aan hayno oo leh ajandayaasha boostada ee la cusbooneysiiyay si aad si fudud ugu ansixin karto sicirka suuqa ugu fiican In ka badan 95% ayaa dhaafa ee Mucaaradka Correos ayaa na taageeraya!
Waa ikhtiyaarka ugu raqiisan uguna dhameystiran dhammaan tan iyo marka lagu daro helitaanka labada mug leh ajandaha cusbooneysiinta ee Correos, waxaad sidoo kale heli doontaa:
Buug u diyaari imtixaannada cilmu-nafsiga
Imtixaanada majaajillada ah si aad u tababbarto
Imtixaanno loo diyaariyo imtixaanka
Helitaanka websaydhka leh kheyraad kaa caawin doona inaad sii hagaajiso u diyaargarowga wicitaanka.
Xidhmada Bilaashka ah
Xirmada lacagta loogu talagalay waxaa loogu talagalay kuwa doonaya inay u diyaargaroobaan sida ugu macquulsan ee imtixaanka tan iyo, marka lagu daro waxa ku jira xirmada keydka, waxaad sidoo kale heli doontaa taxane ah oo xiiso badan oo dheeri ah:
Qaamuusyada iyo tixraacyada sharci dejinta mawduuc
Jadwalka iyo sawirada si loo fududeeyo waxbarashada
Soo koobid mowduuc kasta iyo hageyaal daraasad
Imtixaanada Mock oo leh astaamo dhab ah
Fiidiyowyo sharraxaad leh
Koorsooyin leh farsamooyin wax lagu barto si loogu diyaariyo imtixaanka
Kiniiniyada sharraxaadda ee mawduucyada muhiimka ah
Isdhaxgalka nuxurka aragtida ah
Qalabka koronto dhaliyaha
Imtixaanadii wicitaanadii hore ayaa la falanqeeyay
Waxa kale oo aad marin u heli doontaa akadeemiyadda muddo ah 3 bilood ama 12 bilood, taas oo ku xidhan waqtiga ay tahay inaad waxbarto.
Premium Pack oo leh 3 bilood oo akadeemiyadeed
Premium Pack oo leh 12 bilood oo akadeemiyadeed
Haddii ay dhacdo inaadan xiiseyneyn xirmooyinkaan, waxaad sidoo kale fursad u leedahay inaad iibsato alaabada aad ugu baahan tahay shaqsi ahaan. Kuwaani waa xulashooyinka la heli karo:
Kaliya ajandayaasha: kani waa ajandaha Xafiiska Boostada oo dhan oo la cusbooneysiiyay wicitaankii ugu dambeeyay.
Imtixaanada majaajillada ah: ugu dhaqma imtixaanka habka ugu fudud uguna hufan ee suurtogalka ah.
Buugaag lagu dhaafiyo cilmu-nafsiga: tabaha lagu helo darajo wanaagsan waa in la sameeyo dhammaan imtixaannada suuragalka ah. maxaad sugeysaa
Diyaarinta imtixaanada xulashada badan: su'aalo badan si aad ugu baratid nooca imtixaanka.
2020 waxay ku baaqeysaa mucaaradka post-op
Correos waxay u yeertay 3.421 meelood wacitaan sanadka 2020. Waa in la sheegaa in meelahan oo dhami ay soo kordhinayaan baaxadda qaranka. Kadib, waxaad u baahan doontaa inaad u tagto ku dhawaaqida mucaaradka Correos lana ogaado jagooyinka gobol kasta.
Mar haddii wicitaanku furmo, waxaa habboon in dib loo eego imtixaanka na sugaya. Ku saabsan yahay hal tijaabo oo caadi ah iyo labo gaar ah, labadaba qaybinta iyo kala soocidda iyo adeegga macaamiisha. Tijaabada koowaad, tijaabada guud, waxay ku saleysan tahay tijaabooyin badan oo xulasho ah oo gaaraya 60 su'aalood. Kaliya 10 iyaga ka mid ah ayaa noqon doona farsamo-yaqaan. Si tan loo sameeyo, koox kasta oo ka soo horjeedaa waxay yeelan doontaa qiyaastii 55 daqiiqo. Imtixaanada gaarka ah sidoo kale waa xulashooyin badan. Laakiin xaaladdan, waxaa jiri doona illaa 40 su'aalood iyo waqtiga ugu badan ee ay heli karaan kuwa ka soo horjeedaa waa 35 daqiiqo.
Hadaad dhaaftay wajiga imtixaanka iyo ka takhalusida, markaa wajiga qiimeynta mudnaantaada ayaa imaan doonta. Qaar ka mid ah mudnaanta dhibcaha ayaa ah kuwa soo socda:
Waayeelka Xafiiska Boosta. Iyadoo aan loo eegin jagada la qabanayo, inta lagu gudajiray 7 sano ee lasoo dhaafay.
Ka soo qabtay shaqooyinkii gobolka ee la codsaday.
Ka mid ah Guddiyada Shaqada ee labadaba booska gaarka ah iyo gobolka.
Shahaadooyinka Jaamacadeed ama Tababar Xirfadeed oo Sare ee Maamulka, Maareynta, Ganacsiga, Suuqgeynta iyo IT-ga.
Koorsooyinka laxiriira jagooyinka la codsaday.
Oggolaanshaha A ama A1, 3 dhibcood. Liisanka wadista, kaliya hal dhibic.
Ku dheji shuruudaha mucaaradka
Noqo ugu yaraan 18 sano oo aan gaarin 65 sano.
Cinwaanka Waajibaadka Waxbarashada Sare, ama Qalinjabinta Dugsiga iyo Shahaadooyin kale oo rasmi ah oo beddeli kara heerka koowaad.
Ma haysto nooc kasta oo shaqo ah oo ku xaddidan Xafiiska Boosta.
Inaan shaqada laga ceyrin ama laga tagin adeegga.
Hayso awoodaha loo baahan yahay si ay u gutaan howlaha loo baahan yahay.
Aad haysato dhalasho Isbaanish ah, ama ugu yaraan noqo muwaadin Midowga Yurub. Hayso waraaqaha shaqadu had iyo jeer si habsami leh, si aad u qabato shaqada.
Si aad u noqotid qof dirista boostada, waxaad u baahan tahay kaarka A, A1 ama B.
Sida loo saxeexo mucaaradka Correos
Qoraallada loogu talagalay mucaaradka Correos waxaa lagu sameyn doonaa boggeeda rasmiga ah. Marka muddadii codsigu dhammaato, waxaan iska qori karnaa khadka tooska ah. Si aad isu diiwaangeliso, waa inaad raacdaa dhowr tallaabo:
Waxaad gali doontaa bogga Correo.es, ka dib waxaad aadi doontaa 'macluumaadka shirkadaha', 'Kheyraadka aadanaha', 'Shaqaalaynta' iyo ugu dambayntii 'go'an dakhliga shaqada shaqsiga'.
Tallaabada xigta waa 'diiwaangelinta arjiga'. Qeybtaan, waa inaad dhigtaa Aqoonsigaaga iyo sidoo kale lambarka sirta ah, adigoo raacaya tillaabooyinka ay shabakaddu ku siiso.
Talaabada saddexaad ayaa ah dabool macluumaadkaaga shaqsiyeed. Had iyo jeer hubi in dhammaantood ay sax yihiin oo ha iloobin inaad akhrido siyaasadda asturnaanta.
Hadda waa inaad doorataa gobolka aad rabto inaad ka shaqeyso, iyo sidoo kale shaqada aad hiigsanayso.
para dhammaystirka diiwaangelinta, waa inaad bixisaa sicirka oo ah 13 euro. Haa, kahor intaysan ahayn 10 euro laakiin sare ayey usocdeen. Habka lacag bixinta waa kaar. Marka lacag bixinta la xaqiijiyo, waxaad heli doontaa aqoonsi codsi iyo caddeyn bixinta.
Noocyada kale ee dukumiintiyada iyo sidoo kale cinwaannada aad haysato, muhiim uma noqon doonaan xilligan, laakiin waxaa loo baahan doonaa wejiyada mustaqbalka. Dabcan, si aad u sameyso wixii isbeddel ah, waa inaad kansashadaa codsigii hore oo aad mid cusub mar labaad buuxisaa.
Mushaaraadka shaqaalaha boostada
Runtu waxay tahay in arrinta mushaharku had iyo jeer tahay mid ka mid ah su'aalaha inta badan la isweydiiyo. Waa in la yiraahdaa tirada ugu dambeysa had iyo jeer way kala duwanaan kartaa. Maaddaama ay ku xirnaan doonto mushahar dheeri ah, waayeelnimo, jago iyo arrimo kale oo lagu xisaabtamo. Laakiin weli, waxaan haynaa qiyaasta ugu dhow ee aan fikrad kaa siinno:
Shaqaalaha fulinta: Noocan shaqaalaha dhexdiisa ah waxaan ka heli doonnaa shaqada khalkhalgelinta, turjubaanka, adeegyada mobilada, wadaha, iwm. Dhammaantood waxay leeyihiin mushahar u dhexeeya 1300 ilaa 1500 euro.
Saldhig shaqaalaha rasmiga ah: Wax yar ayaa ka hooseeya mushaharka shaqaalahan. Laakiin waa run inay aad u yartahay, sidaa darteed waxaan ka hadlaynaa 1200 ilaa 1400 euro. Tan waxaa lagu sheegaa inay tahay mushaarka aasaasiga ah ama caadiga ah.
Kala-soocidda iyo qaybinta shaqaalaha: Labada mas'uul ee degmada iyo qoondeeyeyaasha ama qeybinta lugta waxay wada leeyihiin mushaar u dhexeeya 1100 ilaa 1300 euro. Waxay la mid yihiin shaqaalaha yaryar.
Kaaliyaha shaqaalaha: Xaaladdan oo kale, kaaliyaha shaqaaluhu wuxuu yeelan doonaa mushahar gaaraya 1080 iyo 1200 oo Euro.
Manhajka waxbarashada mucaaradka Correos wuxuu ka kooban yahay 13 mowduuc oo guud oo ay tahay inaad ogaato:
Mawduuca 1: Adeegyada caadiga ah iyo / ama diiwaangelinta ee boostada, iyo sidoo kale badeecooyinka ay tixraacayaan.
Mawduuca 2: Waxay diiradda saartay ganacsiga elektaroonigga ah iyo qaybta.
Mawduuca 3: Qiimaha ganacsiga iyo waxyaabo kale oo badan oo lagu daro, iyo sidoo kale adeegyo dheeri ah.
Mawduuca 4: Kala duwanaanta aqoonta shaqada, shaqada laga fuliyo xafiisyada boostada.
Mawduuca 5: Maareynta Dijital ah: Xogta iyo maamulka ee Correos.
Mawduuca 6: Adeegyo kale iyo badeecooyin kala duwan.
Mawduuca 7: Nidaamka gelitaanka.
Mawduuca 8: Daaweynta xirmooyinka, qawaaniinta gaadiidka.
Mawduuca 9: Borotokoolka gaarsiinta.
Mawduuca 10: Agab shirkadeed (Qalabka sida PDA, IRIS iyo kuwa kale oo badan oo muhiim u ah waxqabadka shaqaalaha booskiisa ama howlaha uu qabanayo.
Mawduuca 11: Adeegga macaamiisha iyo daaweynta: Xiriirka ka dhexeeya isla, sida loo helo daaweyn tayo leh oo faa iideysa sawirka shirkadda.
Mawduuca 12: Abaabulka ganacsiga, qaab dhismeedka sharci ee shirkadda iyo istiraatiijiyad ganacsi oo la raaco.
Mawduuca 13: Shuruudaha sinnaanta ragga iyo dumarka iyo aqoonta sharciga ee u dhiganta rabshadaha jinsiga ee shaqada. Kahortaga lacagta la dhaqay iyo daahfurnaanta, u hogaansanaanta anshaxa iyo heshiiska macluumaadka ee xaga amniga (LOPD).
Dhammaan mawduucyadan waxay ka tirsan yihiin qaybta guud ama aragtida ah. Laakiin intaa waxaa sii dheer, waa inaad ka gudubtaa cilmu-nafsiga. Tan awgeed, waxaad haysataa buugaagta manhajka, oo had iyo jeer la jaan qaadaya iyo waliba mid kale oo leh wax kasta oo aad u baahan tahay si aad uga guuleysato qaybta cilmu-nafsiga. Ha iloobin inaad la tababarto qaar imtixaanada jeesjeeska ah, iyo sidoo kale noocyo kale oo walxo ah oo kaa caawin doona diyaarinta imtixaanka xulashada badan. Si gooni gooni ah ama wadajir ah, waxay noqon doonaan ikhtiyaarka ugu fiican ee awooda in la dhigo baytariyada si loo helo booskaaga.
Faa'iidooyinka ka shaqeynta Correos
Faa'iidooyin badan ayaa ku jira ka shaqeynta Correos. Waa mucaarad ay bixiyaan gobolladu. Sidaa darteed, waad dooran kartaa taada, iyo sidoo kale booska lagu ciyaaro. Mushaharkiisu aad ayuu ugu habboon yahay sidaa darteed sidoo kale waa mid kale oo ka mid ah faa'iidooyinka in la tixgeliyo. Tan iyo markii, kan ugu hooseeya uu dhaafi doono 1000 euro.
Jadwalka shaqada ee la qabanayo sidoo kale waa muhiim marka xisaabta lagu darayo. In aad ahaato mid buuxa ama waqti dhiman ah. Labadaba marwalba meelo ayaa laga heli karaa. Intaa waxaa dheer, waa inaan ka fikirnaa inaan wajaheyno a shaqo go'an iyo nolosha, oo leh waxaas oo dhan. Haddii aad timaaddo laakiin aadan helin booskaaga, waxaad haysataa ikhtiyaar kale. Waxaad geli kartaa Bangiga Shaqada ee Xafiiska Boosta. Waad heli kartaa waadna ku shaqeyn doontaa waqti ku habboon, laakiin waa run in tan lagu tirin doono qaybta mudnaanta.